प्रेरण कुकटप FAQ - Zhongshan Amor इलेक्ट्रिकल उपकरण कं, लिमिटेड
१. प्रेरण कुकरहरू सामान्य इलेक्ट्रिक र ग्यास कुकरहरू भन्दा छिटो कुक गर्छन्?
हो, एक प्रेरण कुकर परम्परागत इलेक्ट्रिक कुकटप र ग्यास कुकर भन्दा छिटो छ। यसले ग्यास बर्नरहरू जस्तै खाना पकाउने उर्जाको द्रुत नियन्त्रणलाई अनुमति दिन्छ। अन्य खाना पकाउने विधिहरूले आगो र रातो तातो तातो तत्त्वहरू प्रयोग गर्दछ तर प्रेरण तताउने मात्र भाँडालाई तताउँछ।
२.We प्रेरण खाना पकाउन उच्च ऊर्जा खपत हुन्छ?
होईन, प्रेरण कुकरले तारको कुण्डलबाट ईन्डक्शनले बिजुली उर्जा स्थानान्तरण गर्दछ जब विद्युत् प्रवाह यसको माध्यमबाट बग्दछ। वर्तमानले एक परिवर्तन हुने चुम्बकीय क्षेत्र सिर्जना गर्दछ र तातो उत्पादन गर्दछ। भाँडो तातो हुन्छ र गर्मी चालन द्वारा यसको सामग्रीहरु गरम गर्दछ। पकाउने सतह गिलास-सिरेमिक सामग्रीबाट बनेको हुन्छ जुन एक तातो कन्डक्टर हो, त्यसैले केवल थोडा तातो भाँडोको तल्लोमा हराउँदछ जुन ऊर्जाको न्यूनतम अपव्यय हुन्छ जब खुला ज्वाला पकाउने र सामान्य इलेक्ट्रिक कुकटपसँग तुलना गरिन्छ। प्रेरणा प्रभावले जहाजको वरपरको हावालाई तातो पार्दैन, परिणाम स्वरूप थप ऊर्जा दक्षता।
A. त्यहाँ प्रेरण एकाइको विकिरणबाट स्वास्थ्य जोखिमहरू छन्?
प्रेरण कुकटपहरू अत्यधिक कम आवृत्ति विकिरण उत्पादन, माइक्रोवेव रेडियो फ्रिक्वेन्सी समान। यस प्रकारको विकिरण स्रोतबाट केहि ईन्चको दूरीमा केही पनि घट्दैन। सामान्य प्रयोगको बखत, कुनै पनि विकिरणलाई अवशोषित गर्न तपाईं अपरेटिंग इन्डक्शन एकाईको नजिक हुनुहुन्न।
D. डोज प्रेरण खाना पकाउन विशेष प्रविधि चाहिन्छ?
इन्डक्शन कुकर तातोको स्रोत मात्र हो, यसैले इन्डक्शन कुकरसँग पकाउँदा तातो कुनै पनि प्रकारको फरक हुँदैन। जे होस्, तान्न प्रेरण कुकरको साथ धेरै छिटो हुन्छ।
I.के यो कुकटप सतह गिलास हो? के यसले क्र्याक गर्छ?
कुकटप सतह सिरेमिक गिलासबाट बनेको छ, जुन धेरै बलियो छ र यसले धेरै उच्च तापक्रम र अचानक तापमान परिवर्तन सहन गर्दछ। सिरेमिक गिलास धेरै गाह्रो छ, तर यदि तपाईंले कुकवेयरको भारी चीज छोड्नुभयो भने, यसले क्र्याक गर्न सक्दछ। दैनिक प्रयोगमा, तथापि, यो क्र्याक गर्न असम्भव छ।
I. के यो इन्डक्शन कुकर प्रयोग गर्न सुरक्षित छ?
हो, ईन्डक्शन कुकर पारम्परिक कुकरहरू भन्दा सुरक्षित राख्नको लागि सुरक्षित छ किनकि त्यहाँ खुला ज्वाला र इलेक्ट्रिक हीटरहरू छैनन्। खाना पकाउने चक्रहरू आवश्यक खाना पकाउने अवधि र तापक्रम द्वारा सेट गर्न सकिन्छ, अधिक कुकिड खाना र कुकरलाई नोक्सान पुर्‍याउने जोखिमबाट बच्न पकाउने चक्र पूरा भएपछि स्वचालित रूपमा स्विच अफ हुनेछ।
सबै मोडेलहरू जस्तै सजिलो र सुरक्षित कुकि .को लागि स्वत: कुक प्रकार्यहरू प्रदान गर्दछ। सामान्य अपरेसनमा, कुकि surface सतह खाना पकाउने भाँडा हटाए पछि चोटपनाको लागि छुने राम्रोसँग रहन्छ।
D. के मलाई प्रेरणा पाकको लागि विशेष कुकवेयर चाहिन्छ?
हो, कुकवेयरले प्रतीक बोक्न सक्छ जुन यसलाई इन्डक्शन कुकटपसँग उपयुक्त छ। प्यानको आधार स्टेनलेस स्टीलको चुम्बकीय ग्रेड हो भने स्टेनलेस स्टील प्यान एक प्रेरण कुकिंग सतह मा काम गर्दछ। यदि चुम्बकले प्यानको एक्लोमा राम्रोसँग टाँस्यो भने यसले प्रेरण पकाउने सतहमा काम गर्दछ।